एक लामो ज्ञात सत्य: क्याडरहरूले सबै निर्णय गर्छन्। मानव संसाधन बजारमा अनन्त इन्जिन हो। समय बित्छ, लेबल परिवर्तन, ट्रेडमार्कहरू, अनुहारहरू, फर्महरूको नामहरू, पदहरू, तर यो योजना अपरिवर्तित बनी रहन्छ। कहिलेकाहीं नौकरी रोज्ने मुद्दा सबैको सामु खडा भयो।
रोजगारीको लागि सडकमा पहिलो चरण सही सुरूवातको तयारी हो। धेरै ठीक लाइन - यो बेल्टिबल बिना वा यो सुन्न, विद्यमान व्यावसायिक अनुभवको वर्णन गर्न आवश्यक छ, एकै समयमा सबै सबै भन्दा संरचित र जानकारीपूर्ण तरिकामा राज्य गर्न आवश्यक छ। आखिर, तपाईं आफैलाई कसरी चमकदार र व्यावसायिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, फेरि सुरूवातमा तपाईंको कर्तव्य र उपलब्धिहरू वर्णन गर्दै, तपाइँ एक साक्षात्कारको लागि निमन्त्रणा पाउनुहुन्छ वा तपाईंको प्रतिक्रिया नियोक्ताको लागि अनियमितता रहनेछ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ।
महत्वाकांक्षा परिभाषित गर्नुहोस्
त्यसोभए, हामी आफैलाई एक कर्मचारीको रूपमा साक्षर विज्ञापन बनाउने चुनौतीको सामना गर्छौं।
लेखनको फारम पर्याप्त छ - पुन: सुरुवातमा संचारको व्यक्तिगत डेटा समावेश छ, संचारको लागि सुविधाजनक सम्पर्क सहित, शिक्षाको बारेमा जानकारी, अनुभव, पासित तालिम वा पाठ्यक्रमहरू। एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु: इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न, तपाईंले आफ्नो मुख्य व्यावसायिक वा सार्वभौमिक फाइदा पहिचान गर्न आवश्यक छ।
एउटा सही सुरूवात। कसरी यो हुनुपर्छ
पुन: सुरुको लागि बिसो, कसैले "सुनहरा" सिद्धान्तहरूको पालन गर्नुपर्छ:
• ब्रोता। तपाईंको पुन: सुरुवात 2-3 पृष्ठहरूमा राखिएको हुनुपर्दछ, अधिक छैन।
• संरचितता। तपाईंले संक्षेपमा संकेत गर्नुहुने जानकारी निश्चित निश्चित रूपमा निर्दिष्ट गर्नुपर्छ र पहिला चयन गरिएको फारमसँग मेल खान्छ।
• उद्देश्य। तपाईंको अनुभव र क्षमताहरू इंगित गर्दै, मध्यम रचनात्मकता र कल्पना, उद्देश्य र यथार्थवादी हुनुहोस्। क्रिया क्रियाहरूको प्रयोगको साथ प्राप्त परिणामहरू जोड दिनुहोस्। त्यसै गरी हामी सारांशमा खण्ड "उपलब्धिहरू" भर्छौं ।
• विशिष्टता। यो फारमहरु को छनौट गर्न को लागी विशिष्ट को रूप मा, को रूप मा राम्रो तरिकाले गर्न को लागि सिफारिश को सारांश मा आफ्नो कर्तव्यहरु र उपलब्धिहरु को संकेत।
• चयनता। तपाईंको पहिले देखि नै अवस्थित व्यावसायिक अनुभवको विश्लेषण गर्नुहोस्, लक्ष्यबाट प्राप्त गर्दा मात्र यो उपयोगी छ के हो।
• पोषणशीलता। नकारात्मक जानकारी मनपर्छ। वर्णन, परिभाषा, नापको माध्यमले जानकारीको कथनले तपाईंको हातमा प्ले गर्दैन।
• उपलब्धिहरूमा ध्यान दिनुहोस्। पहिचान र ध्यान दिनुहोस् तपाईंको उपलब्धिहरु। सारांशमा "उपलब्धिहरू" बक्समा कसरी भर्न सकिन्छ , हामी तपाईंलाई पछि बताउनेछौं। संकुचित, थाहा छैन तपाईको उपलब्धिहरु को लागी को लागी? सोच्नुहोस्: सायद तपाईंले राम्रो हेर्न सक्नुहुनेछ? तपाईसँग पहिले नै के छ, के भयो, सफल भयो? याद गर्नुहोस् कि अन्तमा राम्रो लेखिएको सारांश तपाईंको खण्डको पेशेवरहरू मात्र पढ्न सजिलो हुन्छ, तर पनि चयन प्रबन्धकहरूले पनि। यो कर्तव्य, कार्य, उपलब्धिहरू लेख्न आवश्यक छ (सामान्यमा सारांश, यो पनि लागू हुन्छ), तर capacitively, सम्पूर्ण कार्य अनुभव प्रतिबिंबित गर्न।
मानक कालोनिकी सारांश
आजसम्म, मानक फारम भनिन्छ क्रोनिकलिकल सारांश। यो अन्तिम कार्य सुरु हुन्छ र त्यसपछि सबै घट्दो अर्डरमा सूचीबद्ध गर्दछ। तपाईंको कर्तव्य र उपलब्धिहरू तुरून्तै सुरू गर्न रेकर्ड गर्न छिटो नगर्नु, तपाईले चीजहरू उठाउनुपर्दैन।
आउनुहोस् यो यस्तो सारांशको चरण-दर-चरण संकलनको उदाहरणको साथ।
उपनाम, नाम, संर्रोनिक, संपर्क विवरण र वांछित स्थितिको नामबाट सुरु गर्नुहोस्। यो राम्रो हुनेछ यदि तपाईं एक व्यावसायिक शैली मा एक फोटो संग आफ्नो पुन: शुरुवात पूरक।
शिक्षामा बलियो जोड नगर्नुहोस्, यदि तपाईंले लामो समय सम्म आफ्नो अध्ययन पूरा गर्नुभयो भने। अध्ययनको अवधि, विश्वविद्यालयको नाम, संकाय र विशेषता व्यवस्थापन गर्न यो सम्भव छ। तर विद्यार्थीहरू यसको विपरीत, शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइने सिफारिस गरिन्छ।
तपाईं थीसिस प्रोजेक्ट को विषय र केहि व्यायामकार्य निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंले प्रशिक्षण अवधिको दौरान गर्नुभयो। यदि तपाईं सँग धेरै डिप्लोमाहरू छन् भने, तिनीहरू प्राय: उल्टो उल्लेखित क्रममा सूचीबद्ध छन्। तपाईंको शिक्षाको व्याख्यामा, तपाईंलाई विश्वव्यापी रूपमा उच्च स्तरको शिक्षालाई गहिराइ र सम्झन आवश्यक छैन। सम्भव छैन कि यो यादगार तथ्य तपाईंको लागि विशेष रूपमा एक पेशेवरको रूपमा विशेषता हुनेछ।
त्यसोभए, हामी हाम्रो पुन: सुरूको मुख्य सेक्शनमा आए - "कार्य अनुभव"। यहाँ मुख्य कार्य देखाउन यो छ कि तपाइँ प्रस्तावित प्रकार्य को गुणात्मक प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। पुन: सुरुवातमा कार्यहरू र उपलब्धिहरू यसो भनिएको छ कि तपाईंले नियोक्तालाई पक्का गर्न सक्नु भएको छ जुन तपाईलाई आवश्यक छ। यो निस्सन्देह, तपाईंको अघिल्लो कार्य अनुभवमा मद्दत गर्नेछ।
केही सुझावहरू: निम्न योजनामा जानकारीको वर्णन गर्नुहोस्: कार्यको अवधि (रोजगारी र खारेजको मिति), संगठनको सही र पूर्ण नाम, त्यस पछि सधै कम्पनी द्वारा कब्जा गरेको बजार खण्ड, यसको गतिविधिको दायरा, साथ साथै सारांशमा स्थिति र जिम्मेवारीहरू । प्रत्येक काम पछि तपाईं आफ्नो छोड्ने कारण संकेत गर्नेछ भने तपाईं अधिक जानकारीपूर्ण दिन सक्नुहुन्छ।
हामी बिर्सनु हुँदैन कि सेक्शन "कार्य अनुभव" सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण हो, पुन: सुरुवात को सबै जानकारीको बिन्दु को बाहेक। खण्ड "कौशल र उपलब्धिहरू" पहिलो पटक हेरिएको छ। सोच्नुहोस्: तपाईंको पुन: सुरुवात 1-2 मिनेटको लागि पढ्न सकिन्छ, र यस समयमा म्यानेजरले यसको क्षणमा यसको लागि उपयोगी पाउँदछ। यसलाई सहयोग गर्न प्रयास गर्नुहोस्, आफ्नो सुरूवात पुनः सुरू गर्नुहोस्। यसलाई पढ्ने शैलीको लागि एकदमै सरल बनाउनुहोस्।
सार रचनात्मक हुनुपर्छ
अचम्मको सामान्य वाक्यांशहरू: "त्यहाँ धेरै अनुभव छ," "राम्रो प्रबन्धकीय अनुभव," "शानदार संगठनात्मक कौशल," र अन्यहरू, बाहेक उनीहरूले कुनै पनि जानकारी लिने छैनन्, नियोक्तामा सबै चासो छैन, किनभने यदि तपाईले सही तरिकाले तपाईंको राज्यको स्थिति निर्धारण गर्न सक्नुहुन्न भने जिम्मेवारी, त्यसोभए उसले किन यो समयमा तपाईलाई खर्च गर्नुपर्छ?
थाहा छैन पेशेवर उपलब्धिहरू र पुन: सुरुवातमा नतिजा कसरी वर्णन गर्ने वा केहि गलत बिन्दुलाई डराउने डर लाग्छ? तपाईंको नौकरी विवरणमा हेर्नुहोस्। तर धेरै गल्ती नगर्ने, शाब्दिक पुन: सुरुवात फारममा अनुच्छेदबाट अनुच्छेद प्रतिलिपि र पेस्ट गर्नुहोस् , कम से कम यो हास्यास्पद देखिन्छ, अधिकतम रूपमा - यसले संवादको रूपमा यस्तो क्षमतामा संदेह उत्पन्न गर्दछ: तपाईले आफैंका शब्दहरूमा तपाइँ आफैंमा के भन्न सक्नुहुन्न जानकारी प्रतिलिपि गरिएको छ र हास्यास्पद रूपमा टेम्पलेटको रूपमा राखिएको छ। हामी किन पुन: सुरुमा "उपलब्धिहरू" खण्डमा लेख्नको लागी प्रश्नको सामना गरिरहेका थिए, जहाँ लेख्न र कसलाई सामान्यतया यसको आवश्यकता छ? यो आवश्यक छ, संदेह छैन।
मेमोरी आवश्यक पर्दैन
नौकरी जिम्मेवारी बारे कुरा गर्दै, तिनीहरूलाई सबैलाई उल्लेख गर्न सेट नगर्नुहोस्, 5-7 मुख्य चयन गर्नुहोस्, र पर्याप्त। नियोक्ता तपाईंको सम्पूर्ण जीवन यात्रामा चासो छैन, यो उनको लागि राम्रो गतिविधि को अन्तिम 3-5 वर्ष पछ्याउन महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले अतिरिक्त र अनावश्यक सूचनाको साथ पुनः सुरुवात नगर्नुहोस्। विस्तारमा, यो अधिकतम 2-3 अन्तिम कार्यको लायक छ। अरू कोही कर्तव्यहरू बिना डेलिभिजनको उल्लेख गर्न पर्याप्त हुनेछ।
पुनः सुरुमा भर्नुहोस् (स्तम्भ "उपलब्धि", साथै "कुञ्जी कुञ्जी") यो योजनामा समावेश गर्न सकिन्छ जसमा तपाइँले वास्तवमा थाहा पाउनु कसरी कम्तिमा राम्रो काम गर्ने हो र कार्य अनुभवमा लागू भएको हो। सम्झनुहोस् कि पुन: सुरु गर्दा यो मामूली हुन स्वीकार्य छैन। तपाईंको मुख्य कार्य को "बजार" लाई बढावा दिन को लागी, यो आफ्नो सर्वोत्तम पक्ष देखि प्रस्तुत गर्न को लागी छ। एकै समयमा, जानकारी उद्देश्य हुन अनि अघिल्लो अनुभवका तथ्याङ्कहरूमा आधारित हुनुपर्छ। तपाईं पुन: सुरुवात पूरा गर्दा यो कुरा गर्दा के सम्झनाको लागी अरूलाई सम्झनु पर्छ? सफलतापूर्वक परियोजनाहरू र पदोन्नति पूरा गर्ने जानकारीको अतिरिक्त "उपलब्धिहरू" स्तम्भ, यदि तिनीहरूको स्वामित्वको स्तर उच्च छ भने विदेशी भाषाहरूको बारेमा जानकारी समावेश गर्नुपर्छ।
अन्तिम खण्डमा "थप जानकारी" यो तपाईंको व्यक्तिगत गुणहरू संकेत गर्न सिफारिस गरिएको छ जुन तपाईंलाई पेशेवर लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र सामान्यतया तपाईँका पेशेवर निर्देशनहरू मद्दत गर्दछ। यो सेक्सनले नियोक्तालाई निर्धारित गर्न मद्दत गर्दछ कि उसले तपाईलाई खरिद गर्नुपर्छ।
दर्ता, अपरिहार्य साक्षरता र शैलीत्मक एकताका लागि आवश्यकताहरू पालन गर्न नबिर्सनुहोस्, र तपाईंको पुनः सुरुवातले निश्चित रूपमा एक संभावित नियोक्तालाई आकर्षित गर्नेछ।
दुबई मा उच्चतम भवन। दुबई, उचाइ, फोटो मा ऊंची भवन
हंस कागज बनेको
"पर्खालहरू": प्राचीन वातावरण र मेनु पत्रुस म को समय संग